MAWDUUC 9: ILMO SOO RIDID | Ung & Gravid
MAWDUUC 9: ILMO SOO RIDID
Jiidka loo marila’haa sharciga ilmo soo ridida
Ilaa 1960 ilmo soo ridid Noorway waxey aheed xukumaad. Ka hor uur aadan rabin waxaa looga hortagi jiray irbad lab oaf leh loo isticmaalo soohid, jaranjarad ka soo boodis, biyo kulul la dhaxgalo iyo wax yaabo kale. Tani waxey naagaha u aheed mawduuc mu’hiim ah, iyo nagahoo bilaabeen qarnigii hore in ey dagaaltamaan in ayaga go’aaminaan ilmo soo rididda. 1978 kii waxaa soo dagey sharci oo ku saabsan in ey ayaga go’aamyaan, iyadoo ka horjeedka badan yahay. Sida markii lambarka ilmo soo rididda mi’isbadalin Noorway gudeheed. Sanad kasto waxaa lugu qaadaa 15.000 ilmo soo ridid isbitaalada noorweejiga.naagta sedaxaad ee noorway joogta waxay khibrad u leedahay ilmo soo ridid. Sandkiibo waxaa la sameeyaa 2.400 camal ilmo soo ridid ah dhalanyarta dhexdooda 13-19 sano. Xiisb ku saabsan ilmo soo ridid waxaa ka heleysaa Folkehelseinstituttet.
Halkaan waxaa adiga ka helay sharci ilmo soo rididda.
Habka loo soo rido ilmaha
Anaga waxaa kala bixineeynaa daawo iyo qaliin ah ilmo soo rididd.
Naagta waxaa la siinayaa kaniini iyadoo joogto isbitaalka, guriga ayeey aadey markaas labo maalmood kadib ayeey ku soo laabaneysaa isbitaalka (habka ama nidaamka wax loo sameeynaayo waxey ku xirantahay isbitaal ka isbitaal). Inta saboosto ayaa siilka lagilin iyo waxa ilmo galeenka ku jiro wuxuu ku soo baxaa sadax ilaa lix sacadood. Saacadooyinkaan waxey iyada ku jiree isbitaalka. Daawo ilmo soo ridida waxaa la samaynkaraa ilaa markii aad tahay 12 uur isbuuc. Habkaan waxa la subinaa suuxtin la’aan.
Meelo ka mid ah wadanka waxaa loo oggalyahay in ey gurigood ku qataan daawo ilmo soo ridid. Ogeeysiin kale oo ku saabsan wax la kala dooran karo aad ka helaysid isbitaalkaaga waxaad la xiriiri kartaa isbitaalka kuu dhaw.
Qaliinkaan markii la sameynaayo waa lugu suuxin waxeyna khaadaney 15-30 daqiiqo. Naagta waxey haysaneysaa hal maalin ey joogtoo isbitaalka. Qaliinkaan waxaa la suubin karaa illaa naagta ka gaareyso 12 isbuuc uureed. Qaliinkaan waala samayen karaa markii ey naagta dhaafto isbuuca 12, laakiin waxaa waaye in ey gaar u codsasho (fiiri qaanuunka noorway). Hadii aad go’aansatay in aad ilmaha iska soo rirdid, waxaad u tagey taqtar oo kuu diraayo isbitaalka. Hadii kale waxaad toos u aadey qaybta ginekolooga oo isbitaalka ku yaalo ayaad waqti ka codsan kartaa adigoo taqtar marka ugu horeeysa aadin. Maalinta kuugu horeeyso caadada kuugu danbeeysi waa qasab in aad sheegtid. Taqaatiirta dhan waxey ku qasbanyihiin in ey ku caawiyaan codsigaaga oo ku saabsan ilmo soo ridida hadii aad ka yartahay 12 uur isbuuceed, iyo kaa caawiyaan codsashada ilmo soo ridida hadii aad ka weyntahay 12 isbuuc uureed.
Adiga ayaa go’aankaa gaari kartid – laakiin hadii aad ka yartahay 12 isbuuc uur. Si kastaba waxaa kuugu qasab eh in aad saxiidid waraaq ku magic ah «Begjæring om svangerskapsavbrudd». Waxaa ku sameyn kartaa taqtarka mise isbitaalka. Hadii aad kor u dhaaftit 12 isbuuc oo uur ah, waxaa taqtarka ku qasabsanyahay in uu u dirro Abortnemnda isbitaalka adiga ka qaysan tahay. Codsashada waxaa mi’hiim eh in ey ku jiraan sababaha aad adiga u codsaneysid ilmo soo ridida.
Meeqo ayaad mareysaa?
Waxaa qasab kuugu eh in aad xisaabtit maalinta kuugu danbeeysay caadada: hadii ey caadada bilaabmatay 1. Janaayo, waxaad tahay 12 isbuuc uur markey tahay taariiqda 26. Maarso. Waqtigaan ka bacdi go’aanka adiga ma’gaari kartid. Adiga ma xisaabin kartid waqtiga adiga rabtit markii aad adiga uurka qaadid. Abortnemnda sidaas ma’u xisaabiyaan. waqti dheer ha sugin, hadii aad rabtid in aad iska soo ridid ilmaha. Waxey qaadan kartaa waqti in aad ka heshid balan isbitaalka. Isbitaalada oo dhan ee dawladda waxey sameyaan ilmo soo ridid. Lacag kuugu ma fadhiso hadiid haaysatid lambarka qofka.
Ma saxbaa in ey gabarta in ey leedahay hadalka ugu danbeeyo markii laga hadlaayo ilmo soo ridid?
Dhalanyarta waxey sheegaayaan in ey ka oggyihiin wax badan markii laga hadlaayo galmad, laakiin wax yar markii laga hadlaayo ilmo soo ridid. Ma’ sax baa?
Maxaad jeceshihiin wax yaabo kale in aad ka ogaatiin?